शुभद्रा मदन फाउण्डेशनको निम्तोमा प्रदेश १ प्रमुख खोटाङमा - Naya Online
बिहिबार, मंसिर ९, २०७८ (November 25th, 2021 at 10:00pm ) Uncategorized
खोटाङ, ९ मंसिर । प्रदेश नं. १ का प्रमुख माननीय परशुराम खापुङको खोटाङ यात्राको क्रममा आज गाइघाट, कटारीमा भेटघाट र हलेसीको दर्शन गरेर दिक्तेलस्थीत शुभद्रा मदन फाउण्डेशनसम्म पुगेको छ ।
गाइघाटस्थीत जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्रकुमार यादवबाट छोटो भेटघाट कार्यक्रम भएको थियो । जिल्लाका सबै प्रमुखहरु र स्थानीय संघसंस्थाका पदाधिकारीहरुको उपस्थितिमा परिचय आदानप्रदान गरिएको थियो । प्रदेश प्रमुख माननीय परशुराम खापुङलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरबाट सलामी पनि अर्पण गरिएको थियो । यात्राको क्रममा गरिएको स्वागतलाई प्रदेश प्रमुख माननीय परशुराम खापुङद्वारा प्रशंसा भएको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कार्यक्रमपश्चात चारदिन अगाडिमात्रै पुत्रशोकमा पर्नुभएका त्रियुगा नगरपालिकाका मेयर बलदेव चौधरीलाई समवेदना दिन प्रदेश प्रमुख खापुङ पुगेका थिए । मेयरका छोरा डा. मनोज चौधरीको पिकनिक खाइरहेको बेला चौडण्डीगढीस्थीत देवधार खोलामा पौडी खेल्दा डुबेर निधन भएको थियो । समवेदना प्रकट गर्दैै परिवारमा धैर्यधारण गर्न र मृतआत्माले शान्ति पावोस् भन्ने कामना गरेका थिए ।
उदयपुरको डम्पिङ साइटमा बनेको शान्ति बाटिका र त्रियुगा वैद्धिक गुरुकुलम्को प्रदेश प्रमुख खापुङद्वारा अवलोकन भएको छ । संस्कृतको पठनपाठन भइरहेको गुरुकुलम्मा विद्यार्थीहरुले मन्त्रोचरण गरेर स्वागत गरेका थिए ।
उदयपुरको कटारीमा शुभेच्छुकहरुसँग भेटघाटपश्चात खोटाङको हलेसीधाममा पुगेका थिए । हलेसीधाममा त्रिधार्मिक केन्द्र (बौद्ध, हिन्दू र किराँत)ले स्वागत तथा सम्मान गरेको थियो । त्रिधार्मिकले सबैलाई जोड्नसकेको प्रदेश प्रमुख खापुङले बताए।
मंसिर १० गते सुभद्रा मदन फाउण्डेशनले गर्ने कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख खापुङ सरिक हुने कार्यक्रम छ ।